के भएको थियो घोडाघोडीमा त्यस दिन ? |
के भएको थियो घोडाघोडीमा त्यस दिन ?
प्रकाशित मिति :2018-03-13 11:44:19
फागुन २४ गते विश्वभरी र नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर भव्यताका साथ मनाइदै थियो । विभिन्न संघ संस्थाहरुले महिलाका लागि आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा महिलाहरु सहभागी हुँदै गर्दा कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका ५ देउकलियामा भने फरक अवस्था थियो । विश्व अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइ रहँदा १८ वर्षिया बालिकालाई बोक्सीको आरोपमा लगातर ६ घण्टासम्म कुटपिट भइरहेको थियो भने समाज रमिता हेर्नमा मस्त थियो ।
राधा घरमा एक्लै भएको अवस्थामा ५÷६ महिलाको समूह आएर उनलाई घरबाट घिसार्दै घिसार्दै भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरीको घरमा लगिएको थियो । त्यहाँ लगेपछि उनलाई बोक्सीको आरोपमा लगाउँदै कुटपिट गरेका थिए । भोलेबाबाले बोक्सी झार्छु भन्दै राधा माथि जाइलागे ।
राधा माथि बाबा मात्र होइन पार्वती चौधरी पनि जाइलागिन् । पार्वतीले राधाको कपाल लुच्छिने, मुड्की हान्ने काम मात्र गरिनन् कि लात्तिले समेत हिर्काइन् । निर्दोष राधाले निरन्तर कुटाइ खाइ रहिन ।
राधाले आफूलाई निर्दाेष सावित गर्न खोज्दा पनि उनको कुरा न बाबाले सुन्ने न त गाउँलेहरुले । राधाले निर्घात रुपमा कुटाई खाई रहँदा गाउँलेहरुले रमिता मात्र हेरी रहे कसैले ढोँगी बाबाका विरुद्ध एक शब्द निकालनन् ।
बोक्सी प्रमाणित गर्न बाबा र पार्वतीले राधाका सम्बेदनशील अंगहरुमा समेत निर्घात चोट दिएका छन् । राधालाई ६ घण्टासम्म कसैले पनि उद्धार गरेनन ।
राधालाई उनकै टोलका युवाहरुले ६ घण्टापछि बाबाको कुटाइ खानबाट जोगाएका थिए । उद्धारपछि घाइते भएकी राधालाई उपचारका लागि सेती अञ्चल अस्पताल लगिएको थियो ।
राधा चौधरीले बाबाले भनेको नमानेकाले बोक्सीको आरोपमा निरन्तर कुटाइ खाइन् । भोलेबाबाले राधालाई पूजाआज गर्न बोलाएका थिए तर राधालाई उनको व्यवहार मन नपरेकाले गइनन् । यसरी राधालाई पटकपटक बोलाउँदा पनि नगएपछि अपमान गरेको ठानेर राधालाई बोक्सीको आरोप लगाएका थिए ।
को हुन रामबहादुर (भोलेबाबा)
२३ वर्षिय रामबहादुर चौधरी गाउँमै ठेलामा चाट बेच्थे । उनले कक्षा ११ सम्म अध्ययन गरेका छन् । माघ २४ गते सपनामा शिव भगवान आएर समान जुटाएर काम गर्न भनेका छन् भन्दै फलामको त्रिशुल बनाएका थिए । त्यसदिनदेखि आफूलाई भोलेबाबा भनेर आँगनमा शिवको फोटो राखी रोग निको पार्ने दाबी गरी प्रचारप्रसार गरेका थिए ।
उनका सहयोगीका रुपमा किस्मती चौधरी र स्मारिका चौधरी पार्वेती भएर आश्राममा बस्न आएका हुन् । स्थानीयहरुले उनले महिलाहरुको मात्र उपचार गर्ने गरेको बताए । उपचारका निहुँमा उनले महिलाका संवेदनशील अंगहरु छुन्ने स्थानीयहरुको आरोप छ ।
को हुन राधा चौधरी (पीडित)
कैलाली जिल्लाको सदरमुकाम धनगढी घोडाघोडी नगरपालिका ५ देउकलियामा बस्दै आएकी राधा चौधरी पूर्व कमलहरी हुन् । उनी घोडाघोडी ५ राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत छिन् । उनको परिवारमा आमाबुबा, दाजु, भाइ र बहिनीसमेत गरी ६ जना छन् । उनका दाजू र बुबा रोजगारीका सिलसिलामा प्रायः भारतमा बस्छन् । राधा घरकी जेठी छोरी हुन् । राधालाई सानै उमेरमा अर्काको घरमा बसेर काम गर्थिन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण राधा स्कुल पढ्न छाडेर मालिकको घरमा कमलहरी बसिन् । सरकारले ०५७ साल असार १३ गते विभिन्न जिल्लास्थित कमलरीलाई मुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि राधा मालिकको घर छाडेर स्कुल जान थालिन् ।
राधालाई कुट्दा आमाबुबा कहाँ थिए
राधालाई ६ घण्टा सम्म कुटि रहँदा उनी आमा बहिनीलाई लिई अस्पताल गएकी थिइन् । जब आमाले छोरीमाथि कुटपिट भएको थाहा पाई भेट्न आउँदा गाउँलेहरुले उनलाई बीच बाटोबाटै लछार पछार परी छोरी भएको ठाउँमा पुग्न दिएनन् । बुबा पनि घटनास्थलमा नपुगेका होइनन् तर उनलाई पनि धम्क्याएर त्यहीँ छोरीले कुटाइ खाएको हेर्ने दर्शकहरुको भिडमा मिसाइयो ।
प्रहरीले राधामाथि कुटपिट गर्ने चौधरी, किस्मती चौधरी र स्मारिका चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घटनामा संलग्न एक युवती भने फरार छिन् । त्यस्तै घटनाबारे मिलापत्र गराउने इलाका प्रहरी कार्याल सुक्खडका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक दिनेश बिष्ट निलम्बनमा परेका छन् । यसैगरी मिलापत्रमा सहयोग गरेको आरोपमा घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि एमालेले छानबिन समिति गठन गरेका थियो ।